Ahoana ny fomba hamoronana Watermark haingana miaraka amin'i Photohop | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | Photoshop, dia midika hoe, Tutorials
Ahoana no mamorona mari-drano miaraka amin'i Photohop haingana hahazoana arovy ny tetik'asa sary nataonao rehetra amin'ny karazana plagiarism. Tena mahazatra ny mahita mari-drano amin'ny sary izay manome fiarovana fanampiny amin'ny fananan'ny karazan-tsary rehetra, izay tena ilaina hanatrarana asongadino ny mpanoratra ny sary amin'ny lafiny iray ary arovy izy etsy ankilany.
Mianara ampio haingana be ny watermark amin'ny asanao rehetra mba hiarovan-tena amin'ny tambajotran-tserasera amin'ny mety halatra sary. Marina fa afaka mahita sary marobe amin'ny tamba-jotra isika izay tsy dia ampiasaina intsony ireo mari-drano satria na iza na iza mangalatra sary dia manao izany amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, dia mbola mahaliana ihany ny manampy mari-drano misongadina amin'ny maha-mpanakanto anao amin'ny asantsika rehetra.
Mba hanampiana mariky ny rano no zavatra voalohany tokony hataontsika sary izay hampiasainay ho mari-drano, ny mahazatra indrindra dia ny fampiasana a sary famantarana na typografika miaraka amin'ny anaran'ny mpanoratra. Ao amin'ny tambajotra dia afaka mahita isika karazana mari-drano maro miovaova arakaraka ny artista, misy mpanakanto aleony mampiasa mari-drano tsotra sy mazava ary ny sasany kosa maniry fari-drano izay mibahana ny sary iray manontolo, amin'ny sehatra manokana dia tiako ny watermark tena misoko mangina izay tsy misongadina loatra amin'ny sary.
Amin'ny ankapobeny, ny mari-drano dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Manana izany opacity kely
Tinta tokana (mainty na fotsy)
Mikaroka na mamorona sary izay hampiasainay izahay Modèle ary taty aoriana dia hosokafantsika izy io Photoshop.
Vantany vao nosokafana ny sary famantarana anay Photoshop ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ampidino ny opacity ary fenoy pMba hampiharihary mangarahara azy. Ny ara-dalàna (mahazatra indrindra) dia ny mari-drano mba hanana opacity ambany kely ary hameno, hanatrarana manintona kely ny saina.
Rehefa avy nampidina ny opacity sy ny famenoana ny sary famantarana izahay, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manova habe azy ka ampifanarahana amin'ny a mizana tokanaManapa-kevitra ny habeny mifanaraka amin'ny filanay izahay. Mba hanovana ny haben'ny sary famantarana anay dia tsy maintsy mankany amin'ny menio ambony amin'ny Photoshop ary tadiavo ny safidin'ny sary / sary habe.
Tena soso-kevitra izany ampiasao hatrany ny fomban'ny watermark Mba hamoronana tsipika famolavolana izay mitovy foana dia tsy maintsy fadio ny fananana karazana watermarks an'arivony fa ampiasao tsotra izao ny mitovy amin'ny sarinay rehetra.
Raha vantany vao nanova ny haben'ny mari-drano isika, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia Tehirizo amin'ny endrika PNG ny sary ka tsy manana karazana fiaviana ary afaka mampiasa azy tsy misy olana.
Aorian'ny fitahirizantsika ny mari-drano amin'ny endrika PNG dia ho afaka hampiasa azy io tsy misy olana amin'ny sarintsika rehetra. Raha hampiasa ilay mari-drano, ny sisa ataontsika dia ny tariho ny sary hanokatra sary in Photoshop.
Tao anatin'ny minitra vitsy monja dia nianarantsika izany mamorona ny fari-dranontsika manokana, dia dingana iray haingana be sy mahasoa izay afaka manampy antsika hiaro tsara kokoa sy hanasongadinana ireo sary an-tsary rehetra nataontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano amin'ny Photohop